बिहिवार, माघ ६, २०७८ ओखल न्युज
माघ । राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले अहिलेको आवश्यकता स्थानीय तहको निर्वाचन नै भएको बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै संघीयताका विज्ञ समेत रहेका सांसद देवकोटाले भने, “सत्ता गठबन्धनमा ‘अर्ली इलेक्सन’को कुरा आए पनि अहिलेको आवश्यकता स्थानीय तहको निर्वाचन नै हो । संविधानको धारा २२५ ले केही दुबिधा सिर्जना गरे पनि नेताहरुले समयमै निर्वाचन गराउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।”
स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने चक्रव्यूह गलत भएको उनको जिकिर छ । देवकोटाले भने, “विगतमा समयमै निर्वाचन हुँदा स्थानीय तहमा २० वर्ष जनप्रतिनिधित्व हुन सकेन । स्थानीय तहका पदाधिकारीको जेठ ५ गते ५ वर्षे कार्यावधि सकिन्छ । संविधानले ६ महिनाभित्र भनेको अन्तिम दिन होइन, एक दिनपछि गरे पनि हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुन्छ, गर्नैपर्छ ।”
स्थानीय तहभन्दा पहिले प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने हो भने दुई तिहाइ बहुमतले लिखित संकल्प प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, “सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले एमाले प्रतिनिधिसभाको चुनाव चाहन्छ कि चाहँदैन ? तीनै तहको निर्वाचन एकै समय गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम छ कि छैन ? छ भने पनि राष्ट्रिय सहमति हुनु आवश्यक छ । हुन सक्दा मुलुकको हितै हुन्छ । राज्यको खर्च कम हुन्छ, जनताको समय पनि बचत हुन्छ ।”
उनले एमालेले संसद अवरोध गरेर लोकतन्त्रकै धज्जी उडाएको आरोप पनि लगाए । देवकोटाले थपे, “प्रतिनिधिसभाको रिसले राष्ट्रिय सभा पनि लन्ठिएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको विषयमा संसद्मा कुरा उठाउन पाइँदैन । सभामुखको कामका विषयमा पनि बोल्न मिल्दैन । तर एमालेले त्यसको धज्जी उडाएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना त गर्यो तर कुनै निकास पाएन ।”
प्रकाशित मिति: बिहिवार, माघ ६, २०७८, ०९:३८:४७